တရုတ် Conical လေ့ကျင့်ခန်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | မင်္ဂလာဆောင်
နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်အပေါ် အခြေခံ၍၊ အရည်အသွေးအခြေပြုခြင်း၊ ထူးချွန်မှုကိုရှာဖွေခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောစိတ်ဆန္ဒရှိရှိဖြင့်သင်၏နောက်ထပ်စျေးကွက်ကိုကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
xxx စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုဆောင်ကြဉ်းပေးသောကမ္ဘာ့စီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ အရည်အသွေး၊ ပထမ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုအရည်အသွေးပြည့် ၀ သောထုတ်ကုန်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူပိုမိုမြင့်မားသော၊ ပိုမိုမြန်ဆန်။ ပိုမိုအားကောင်းသည့်စိတ်ဓာတ်အောက်တွင်တောက်ပသောအနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ရန်။
၁။ အဆင့်တွင်းတူးစက်သည်အထူ ၅ မီလီမီတာအထိအထူရှိသောသတ္တုပြားများ၊ ပိုက်များ၊ ပလပ်စတစ်ပြားများ၊
၄။ Single Cutting Edge - သတ္တု၊ ပလပ်စတစ်၊ သစ်သားနှင့်အခြားပါးလွှာသောပစ္စည်းများအတွင်းတွင်ပတ် ၀ န်းကျင်ထိုးနှက်ခြင်းမရှိဘဲပတ် ၀ န်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကောင်းမွန်စေသည်။
6. Shank: လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာအများစုနှင့်အံ ၀ င်ခွင်ကျဖြစ်စေပြီးတိကျမှုရှိသည်။
7. သာ rotary အသုံးပြုရန်။
ရှေ့သို့ MTS HRC55 Solid Carbide Twist Drills (3D)
နောက်တစ်ခု: RPMT1003MO-TT-DH122 ကြိတ်ခြင်း / အလှည့်အတွက် Carbide Metal Insert
Diamond Shape Carbide အစားထိုး Iinserts Shim ...